Ezona qebengwana ziyiliweyo zeapile okhe wazibona | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ezi zezona pie zibalaseleyo kwezakha zabonwa
Ubugcisa beNkcubeko ayisileli kolu luhlu loyilo ngakumbi luyakwazi ukuhombisa ukutya okuluncuthu esizifaka emilonyeni yethu ukwanelisa ezona zinto sizithandayo. Inkalakahla elungileyo ibalulekile ukuba ube ngumpheki omkhulu, kodwa icala lobuhle nalo linendima ebalulekileyo ekulungiseleleni isitya ekufuneka sifikelele kubathengi abafuna kakhulu.
U-Lauren Ko ngumpheki we-pastry ovela eSeattle, e-United States, onako Sishiye sitshatiwe ziiieie zabo zeapile apho kukho, ngokwamalungu alinganayo, umsebenzi ofanayo kokubini ekuhombiseni kwezobugcisa kwaye oko kunikezelwe ukwanelisa eyona palate inzima. Iikeyiki nganye ze-apile zika-Ko ziyakwazi ukugcwalisa amehlo akho kunye nokuvuselela umdla wakho wokufuna into emnandi ekhitshini ukusukela ngalo mzuzu.
Ko Usebenzisa iikeyiki zewadi, kodwa ujike kwelakhe icala. Inoxanduva lokuthatha imitya emincinci yomgubo uyenze ibe yimatriki entsonkothileyo ekwaziyo ukuzoba ezona milo zintle esizibonileyo kwipayi yeapile.
Abo matrices banako zoba zonke iintlobo zamaqebengwana apho unokuqaqambisa iitsheri ezimbalwa ngokungathi ziyilwe ngamehlo enkunzi, kanye njengokuba enye inokubonakala ngathi ithatha imilo ye mandala embindini.
Umbala kunye neemilo zejiyometri ukuphefumlelwa kwakhe ekhitshini kula maqebengwana eapile akhangeleka emhle. Into ehlekisayo ngale yokubhaka yile ebepheka into engaphaya konyaka ezi iikeyiki ezivela kwiakhawunti yakhe ye-Instagram @lokokitchen; apho ungabona khona zonke iikeyiki zazo ukuba ziphefumlelwe kule ilandelayo uyenzayo.
I-khekhe kunye nekhitshi oko Asikokokuqala bedlula le migca for bonisa elona cala lobugcisa lobukhokho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ezi zezona pie zibalaseleyo kwezakha zabonwa
Thatha iifoto zemigangatho yeehotele kwihlabathi liphela kwaye ufumane abalandeli abangama-500 kwiveki enye